VaZuma Votumira Nhumwa Dzavo kuZimbabwe
Kurume 14, 2013
WASHINGTON — Mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, vanova mutongi gava weSADC panyaya yeZimbabwe, vatumira nhumwa dzavo kunosimbisa chido cheSADC chekuzadzikisa misariridzwa yechibvumirano cheGlobal Political Agreement uye kunoongorora nyaya yereferendamu iri kuitwa neMugovera.
SADC yakaita musangano wayo kuPretoria neMugovera ikatambira gwaro raVaZuma panyaya yeZimbabwe rinokurudzira zvavari kuda kuti zvizadzikiswe sarudzo dzisati dzaitwa.
Munyori mukuru weSADC, VaTomaz Salomao, vanoti SADC iri kuda kuti muZimbabwe muvandudzwe zvinhu pasati paitwa sarudzo uye ziso rayo riri paZimbabwe.
Chipangamazano chaVaZuma munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika, Muzvare Lindiwe Zulu, vanoti vari muZimbabwe umo vari kuita misangano yakanangana nekuzadzikisa gwara resarudzo kana kuti election roadmap sezvakakurudzirwa neSADC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari nhengo yebhodhi reZimbabwe Democracy Institute, Muzvare Gladys Hlatywayo, vanoti SADC inofanira kuramba yakamira semusambangwena kuti zvinhu zvichinje muZimbvabwe.
Hurukuro naMuzvare Gladys Hlatwayo